မေမြတ်နိုးနဲ့သရဖူကိစ္စ | ထွေထွေထူးထူး ကိုရွှေထူး
Leaveareply	မြန်မာအလှမယ် မေမြတ်နိုးကို သရဖူရုတ်သိမ်းတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြောစရာလေး တွေရှိလာပါတယ်၊ အေဂျင်စီက လှနုထွန်းနဲ့ မေမြတ်နိုးတို့ကြား ဘယ်လိုတွေကတိကဝတ်တွေ ရှိခဲ့လဲတော့ သေချာမသိဘူး၊ အခုကြားထဲက ဝင်လာတဲ့ ကိုရီးယားအဖွဲ့ အစည်းအကြောင်းကို ပြောချင်တယ်၊ နိုင်ငံကိုယ်စားပြုမယ်တစ်ယောက်ကို ဒေါ်လာတစ်သိန်းတန် (တကယ်ကောတန်ရဲလား မသိ) သရဖူယူပြီးရှောင်နေပါတယ်ဆိုပြီး ကြေငြာချက်ထုတ်လိုက်ကတည်းက အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ ကလေးကလားဆန်မှုနဲ. မရိုးသားမှုကို ဖော်ပြလိုက်သလိုပါပဲ။
နောက်ပြီး မေမြတ်နိုး ကိုရီးယားကိုမိခင်နှင့်အတူသွားတဲ့အပေါ်မှာရော အဲ့ဒီအဖွဲ့ အစည်းက မိခင်ကို ပြန်လွှတ်ပြီး မေမြတ်နိုးတစ်ယောက်ထဲနေခဲ့ဖို့ ဖိအားပေးတာကလည်း အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းရဲ့ မရိုးသားမှုကို သိသာစေပါတယ်၊ အသက် နှစ်ဆယ်မပြည့်သေးတဲ့ မိန်းခလေးတစ်ယောက်ကို ဘယ်လိုမိဘက နိုင်ငံရပ်ခြားမှာတစ်ယောက်ထဲ ထားခဲ့နိုင်မလဲ၊ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ၊ နောက်ထပ် ထပ်ပြီးမသင်္ကာစရာကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေက လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့မယ်တွေထဲက သုံးယောက်ဟာ ထွက်ပြေးလို့ လေဆိပ်ထိတောင် လိုက်ဖမ်းယူရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းဟာလည်း ထွက်ပေါ်လာတယ်။
At the 2011 pageant Amy Willerton,acontestant representing Wales, along withanumber of other contestants, claimed the pageant had been fixed after the girl representing Venezuela was apparently placed runner-up of the talent round before she had competed. Led by Willerton, the contestants demanded answers from organisers and later made claims that some contestants had been offered automatic top-ranking placements in exchange for sex, by organisers. The events were filmed by Willerton and other contestants (which were later uploaded to YouTube under the title “Confessions ofaBeauty Queen” and spread throughout the pageant industry). Subsequently, she and the representatives from Aletha Shepherd of Guyana and Costa Rica] and Pamela Peralta … fled their hotel to the airport, claiming the pageant organisers had tried to keep them there against their will and had followed them to the airport to stop them escaping.The Korean National Police Agency and organizers denied all accusations.Willerton claimed that the organizers bribed the police officers.
ပထမဆုံးနှစ်မှာပဲ ကိုရီးယားအလှမယ် ဂျန်အန်းအာ ထိပ်ဆုံးအဆင့်ဝင်နိုင်ဖို့ ကာမကို အလှူတော်ပေးခဲ့ရတယ်စွပ်စွဲခံရပြီး ပြိုင်ပွဲကနေနုတ်ထွက် ဗြိတိန်အလှမယ် အေမီဝီလာတန်ကလည်း ပြိုင်ပွဲစီစဉ်သူတွေက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်စော်ကားဖို့ကြံစည်လို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရကြောင်း တစ်ကမ္ဘာလုံးသိအောင် ရင်ဖွင့်ပြောပြခဲ့ရတဲ့အဖွဲ့အစည်း။ ခု အဲဒီအဖွဲ့အစည်းက မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံး ကိုစော်ကားတာတော့ လက်မခံနိုင်ပါဘူး။
ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာ မေမြတ်နိုးဘက်ကနေပြီးတော့ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ရပါလိမ့်မယ်၊ သမိုင်းကြောင်းမကောင်းခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားအဖွဲ့အစည်းကိုရော၊ မယ်တွေအပေါ်မှာ ကာကွယ်ရပ်တည်မှုလုံးဝမရှိပဲ ကိုယ့်အတွက်ပဲရှေ့တန်းတင်ပြီး ထိမ်းချုပ်ထားချင်တဲ့ လှနုထွန်းရဲ့အေဂျင်စီကိုရော၊ ဘာမှန်းညာမှန်းမသိ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်က တခုခုရေးလိုက်၊ပြောလိုက်ရင် ကိုယ့်နိုင်ငံသားဘက်က သေသေချာချာ မစုံစမ်းမလေ့လာပဲ ရေးတတ်တဲ့သူတွေကိုရောသတိပေးချင်ပါတယ်။
Miss Asia Pacific World ဟာ စတင်တည်ထောင်တာ သုံးနှစ်တာဘဲရှိပါသေးတယ် ကိုရီးယားအနုပညာအမည်ခံအေဂျင်စီတွေဟာ သူတို့ရဲမော်ဒယ်တွေ သရုပ်ဆောင်တွေကို လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖိုအတွက် လူကိုချရင်းနှီးခိုင်းလေ့ ရှိပါတယ်။( သေသေချာချာဆက်စုံစမ်းရင် လူကုန်ကူးမှုလို.တောင် ခေါင်းစဉ်တပ်လို.ရနိုင်တယ် )
လွန်ခဲ့တဲ့လေးနှစ်လောက် အဲလိုမျိုး အတင်းစေခိုင်းလို သက်သေသွားတဲ့ ကိုရီးယား သရုပ်ဆောင်ရဲသေတမ်းစာမှာပါတဲ့ အချက်အလက်တွေကြောင့် သူဌေးတချိုနဲ့ ရုပ်သံဒါရိုက်တာတချိူ အရေးယူခံခဲ့ရပါတယ်။ APW organization Korea က ပွဲလုပ်တာ သုံးနှစ်ဘဲရှိပေမယ့် မေမြတ်နိုးနဲ့ပါဆိုရင် သရဖူသိမ်းတဲ့ အဖြစ်မျိုးက ၃ ကြိမ်ရှိပြီး လိုကြားပါတယ်ခင်ဗျာ။
မေမြတ်နိုးတစ်ယောက်ထဲကို လက်ညှိုးထိုးနေလို့တော့မပြီးဘူး။ ဘာတဲ့ …အလှမယ်ကို ထိန်းချုပ်မရလို့ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းဆီကို လှမ်းတိုင်တယ်လို့လည်းကြားတယ်။ အဲဒီသူတွေရော ဒီလိုတန်းမရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပြီး ပြည်တွင်းက ရိုက်စားလုပ်နေကြတဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်စေခဲ့ကြတဲ့သူတွေရော အားလုံးကိုရှုတ်ချပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၂ ရက် မေမြတ်နိုးရဲ့ ရှင်းလင်းပွဲဆီကနေလည်း နောက်ကွယ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့လှို့ ၀ှက်ချက်တွေအားလုံးကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချပြရင်ဖွင့်ဖို့လည်းမျှော်လင့်နေပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးကို ကိုရီးယားက ၃ နှစ်လောက်သာရှိသေးတဲ့ နံမည်ပျက်ရှိတဲ့၊ ဘာမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ.အစည်းတစ်ခုက စော်ကားတာခံလိုက်ရတာ ရင်နာလို့မဆုံးဘူးးး။ လေးစားလျက်…။။
This entry was posted in Artical, မြန်မာသတင်း and tagged မစ်မေမြတ်နိုး, သတင်း, သရဖူကိစ္စ, မော်ဒယ်, မေမြတ်နိုး, မြန်မာသတင်း, မြန်မာနောက်ဆုံးသတင်းများ, ၂၀၁၄, blogger, Burma Blogger Shwe Htoo, Burma Girl, Burma Model, Burma Model Girl May Myat Noe, Korea, May Myat Noe, Miss Asia Pacific, Miss Korea, Miss May Myat Noe, Model May Myat Noe, Myanmar Model on September 1, 2014 by koshwehtoo.	Post navigation
← Beware of Logic
ုနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေ ဘယ်တော့မှ ပြည်သူကို ကူမလဲ →